Hamra Khabar | » प्रदेश २ लाई किन चाहियो अनुसन्धान ब्युरो? गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्- यो राम्रो संकेत होइन प्रदेश २ लाई किन चाहियो अनुसन्धान ब्युरो? गुप्तचर पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्- यो राम्रो संकेत होइन – Hamra Khabar
‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनको औचित्य देखिन्न’
यही काम अब गठन गर्न लागिएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई दिने भनिएको छ। अर्कोतर्फ प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा, आर्थिक अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश ब्युरोलाई दिने भनिएको छ। जुन काम अहिले नेपाल प्रहरीका युनिटले गर्दै आएको छन्। यस्तो अवस्थामा एउटै कामका लागि प्रहरी, प्रधानमन्त्री मातहतको गुप्तचर र प्रदेशको गुप्तचर खटिनुपर्ने हुन्छ।nepallive